दाबी भुक्तानी मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा भुक्तानी हुन बाँकी रकम बढ्यो | Notebazar
दाबी भुक्तानी मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा भुक्तानी हुन बाँकी रकम बढ्यो
काठमाडौं। ९फाल्गुन, २०७७, आईतवार / Feb 21, 2021 11:52:am
पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएपनि भुक्तानी हुन बाँकी दाबी बापतको रकम भने बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
बीमा समितिले दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई छिटो, छरितो पार्ने उद्देश्यका साथ दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन जारी गरेको भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कतिपय बीमा कम्पनीको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया छिटो छरितो भन्ने नारा नारामै सीमित भएको देखिन्छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्न बाँकी दाबी रकम १४ अर्ब रुपैयाँ बढी छ । चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा १८ बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम १४ अर्ब १५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीहरुमा ७७ हजार ५२२ बीमा दाबी वापत सो बराबरको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको हो । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीहरुले ७७ हजार ५२२ बीमा दाबी वापत ११ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको थियो । गत आवको तुलनामा चालु आवको यसै अवधिमा ३ अर्बभन्दा कम दाबी भुक्तानी भएको हो ।
दाबी भुक्तानीको लागि बीमितको निवेदन प्राप्त भएमा कम्पनीले आवश्यक जाँचबुझ गर्न घटना स्थलमा सर्भेयर खटाउँछन् । उक्त निर्देशिकामा सर्भेयरले कम्पनी समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको साधारणतया ३५ दिनभित्र बीमितलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
जीवन बीमाको भन्दा निर्जीवन बीमाको दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया लामो हुने हुनाले कम्पनीहरुमा भुक्तानी गर्नुपर्ने दाबी रकम बढी देखिने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले बताए ।
बीमा ऐन २०४९ अनुसार कुनै दुर्घटना भएको जानकारी पाउने बित्तिकै बीमकले सर्भेयर खटाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । सर्भेयरले आवश्यक जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र बीमकको दायित्व निर्धारण गरी बीमक समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेपछि ३५ दिनभित्र बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’ उनले भने ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुद्धारा ७ अर्ब भुक्तानी
चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ७ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् ।
वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका १८ बीमा कम्पनीले चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा ४९ हजार ९५० बीमा दाबी वापत ७ अर्ब ६१ करोड ७० लाख रुपैयाँ कुल दाबी भुक्तानी गरेका हुन् । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बढी हो ।
गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीहरुले ४५ हजार ४१६ बीमा दाबी वापत ५ अर्ब ४१ करोड ९ लाख रुपैयाँ कुल दाबी भुक्तानी गरेका थिए ।
नोटः तालिकालाई ठूलो बनाउन फोटोलाई क्लिक गर्नुहोस्
हिमालयन जनरल र शिखरको धेरै भुक्तानी
धेरै रकम भुक्तानी गर्ने कम्पनीमा हिमालयन जनरल र शिखर इन्स्योरेन्स रहेका छन् । हिमालयन जनरलले १ अर्ब ३४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ कुल दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले तीन हजार ६८ बीमा दाबी वापत सो रकम भुक्तानी गरेको हो । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले २ हजार ४ बीमा दाबीवापत १८ करोड १३ लाख रुपैयाँ कुल दाबी भुक्तानी गरेको थियो ।
यस्तै शिखर इन्स्योरेन्सले ९ हजार ५५१ बीमा दावी वापत १ अर्ब ८५ लाख रुपैयाँ कुल दाबी भुक्तानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले ८ हजार ४१८ बीमा दाबीवापत ८६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ कुल दाबी भुक्तानी गरेको थियो ।
६ कम्पनीको दाबी भुक्तानी रकम घट्यो
कम्पनीहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार ६ कम्पनीले दाबी भुक्तानी रकम घटेको छ । प्रुडेन्सियल, एनएलजी, सगरमाथा, जनरल र प्रभु इन्स्योरेन्सको कुल दाबी रकम घटेको हो ।
प्रुडेन्सियलको ३७.१८ प्रतिशत, प्रभुको १९.३३ प्रतिशत, एनएलजीको ४.३७ प्रतिशत, जनरलको ३.२८ प्रतिशत र सगरमाथा इन्स्योरेन्सको २.२४ प्रतिशतले घटेको हो ।
बीमा कम्पनीका कर्मचारीलाई ५९ करोड बोनस3days ago
निर्जीवन बीमा कम्पनीद्धारा १७ अर्ब ८६ करोड बीमा शुल्क संकलन, माघमा मात्रै साढे २ अर्ब धेरै6days ago
सात महिनामा २५ अर्बको नयाँ जीवन बीमा व्यवसाय विस्तार, माघमा मात्रै ४ अर्बले बढ्यो6days ago
९ जीवन बीमा कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखले बुझे ५ करोड २२ लाख, कसको तलब कति ? 22/02/2021
एघार जीवन बीमा कम्पनीले सार्वजनिक गरे बोनसदर, कुनमा पाइन्छ धेरै ? 06/02/2021